ICoronavirus IgG ne-IgM Test Cassette
Umgomo we-Artron COVID-19 IgM / IgG Antibody Testay ukubonwa okungu-antibody-Capture immunochromatographic kokubanjwa kanyekanye kwe-IgM & IgG antibodies kuya kwegciwane le-COVID-19 ku-serum yomuntu, i-plasma, noma amasampula egazi wonke.
Ingasetshenziselwa ukuhlinzwa kokuhlinzwa kanye nokwelashwa kweziguli.Inspection of ukuvimbela ubhubhane ezindaweni zomphakathi; Ukutholakala kwezindawo ezithintekile ngegciwane; ezisetshenziselwa ezempi, ezokwelapha, amakhemikhali, ukuvikela imvelo, ezokuhamba, ukuvikela ubhubhane neminye imikhakha.
Ama-Aprons aphikisa uketshezi, igrisi kanye nama-oyile.Food processing, ubuhle, ukukhiqiza, ukwakha kanye nokuhlanzeka nokusetshenziswa kwansuku zonke.
Ilabhorethri, ikhishi, zonke izinhlobo zezindawo zidinga ukuvikelwa kokumanzana okuphakathi.
Ubufakazi bamanzi, ubufakazi bokuthi uthuli, i-oyela-ubufakazi
Kusetshenziswa empilweni yansuku zonke. Ingasetshenziswa ehhovisi loMsebenzi, ekhishini, emvuleni yemvula, ephathini enkulu, emihlanganweni njll. Ukuchazwa kokuzivikela kobuso obusezingeni eliphezulu, kusetshenziswa kabanzi emabhange, kubasebenzi bokuhamba, ezindaweni zokudlela, nasezindaweni zomphakathi; Isivikelo sesihlangu sivikela ngempumelelo vikela umsebenzisi ekuqhafeni ukungcola ebusweni empilweni yansuku zonke nomsebenzi. Ngaso leso sikhathi, isihlangu sobuso sinokusebenza okuhle kokulwa nenkungu futhi sinikeza umbono osobala.
Ilabhorethri, ikhishi, zonke izinhlobo zezindawo zidinga ukuvikelwa okulinganiselwe okuphathelene noketshezi
Impahla yokugqekeza eyilahlayo
Isulul Gown A
Ngobubanzi obunechisi ezintathu ezibunjiwe futhi ezinwebekile ngebhendi yokujikeleza kobuso, i-hood ingasifanela kangcono isimo sobuso futhi ingezelele umphumela wokuvikela.
Izambatho Zokwelapha Ezilahlayo, Amanzi-Proof Apron, Amanzi-Proof Hdpe Apron, Izingubo Zokuvikela, Dust-Proof Pet Face Shield, Izigqoko Zokuzivikela,